Ụzọ ịkụỤlọ a na - akwụsị n’ahụ́N’ebe a na - enwe mfe dị nnọọ mfe. Nke mbụ, a na - etinye otu ụgbọ mmiri n’okpuru, a na - emekwa ụgbọ mmiri ndị ọzọ nile n’elu n’elu ígwè a na - akpọ n’ahụ́. A na - egbochi ígwè ndị ahụ a na - ahapụ ya ma tinye n’usoro. Ụbọd a na - akpọtụ, otu n’ime ígwè ndị ahụ na ụgbọ mmiri ndị ọzọ. N’otu ụzọ ahụ, a na - akwụ ígwè ahụ n’oge kwesịrị ekwesị.
Ụlọ a na - akpọ n’ahụ́ bụ ịhazi tà a na - eme ka iwu e si n’elu, see buckles abụọ dị n’asụsụ nke mpịa a haziri ya ọnụ, n’elu nakwa n’ebe dị elu mgbe ị na - akpọsịrị n’aka ekpe na n’aka nri, ma mesịa dozie ọnụ ọkụ nke mpịa ahụ a na - akọ. Mgbe ị na - ere ígwè, ṅaa ntị n’ihe iwu ahụ, emekwala ụzọ.
Ụzọ ọzọ bụ ịtị mpịa ahụ gbara gburugburu iji mee ka ụgbọala, tinye ọnụ ọgụgụ kwesịrị ekwesị nke mpịa a kwadebe, ma mesịa mee ka ha na - anọkọ. E kwesịrị ịchọpụta na e nwere n’etiti ụgbọ mmiri na ụgbọ ahụ ekwesịghị ịdị nnọọ anya.
Ochie:Ịrụ foto nke ọ̀tụ̀tụ̀ nnwale
Ọzọrụ:E si n’Ebe China
Otú E Si n’Ebe Ọkụ: Ihe Ndị Dị Okè Na - ekwesịghị Ike
Ụlọ a na - akwụsị n’akwụkwọA na - akpọkwa wit a na - achọ a na - achọ mma ma ọ bụ wita a na - akpọ n’ahụ́. N’oge nile, a pụrụ ịkpọ ya n’ụzọ dịgasị iche iche. Ụdị a na - akwụkwa a na - eme ka a na - ak...